လေယာဉ်တစ်စီးလုံး နင်တန်းဒိုး ဂိမ်းစက် လက်ဆောင်ပေးပြီး Surprise လုပ်ခံခဲ့ရ – Gaming Noodle
လေယာဉ်တစ်စီးလုံး နင်တန်းဒိုး ဂိမ်းစက် လက်ဆောင်ပေးပြီး Surprise လုပ်ခံခဲ့ရ
ယနေ့မနက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒါးလက်စ် မြို့မှ ဆန်ဒီယေဂိုမြိ်ု့သို့ ပျံသန်းခဲ့တဲ့ Southwest Airline လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးမှာ လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့တဲ့ ခရီးသည်တွေအားလုံးကို မထင်မှတ်ထားတဲ့ အံသြမှုမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ ခရီးသည်တွေအားလုံးကို Nintendo Switch ဂိမ်းစက် တစ်လုံးစီနဲ့ မကြာသေးမီက အသစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ Super Mario Maker2ဂိမ်းတစ်ခုစီကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ပါတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအစီအစဉ်ကိုတော့ Nintendo နဲ့ Southwest Airline တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး လက်ဆောင် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကတော့ မြန်မာငွေ ၅၅၀,၀၀၀ ကျပ်ခန့် ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသည်တွေရဲ့ ထိုင်ခုံတစ်ခုချင်းစီမှာတော့ အောက်ပါ ကဒ်လေးတွေပေးထားခဲ့ပါတယ်။
Credit: Juan Jose Anchante’s Twitter
“Southwest လေကြောင်းမှ အကောင်းဆုံး ခရီးသွားဖော်အဖြစ် နင်တန်းဒိုး Switch ကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။ နင်တန်းဒိုးနဲ့ Southwest လေကြောင်းရဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ် Nintendo Switch ဂိမ်းစက်နဲ့ Super Mario Maker2ဂိမ်းကို ရယူလိုက်ပါ” လို့ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်
အချို့သော ခရီးသည်တွေကတော့ ဂိမ်းစက်နဲ့ ဂိမ်းအပြင် Mario ဦးထုပ် တွေပါ လက်ဆောင်ရခဲ့ကြတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ထိုသို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နှစ်စဉ်လူပေါင်း တစ်သိနိးခွဲခန့်လာရောက်ကျတဲ့ San Diego Comic-Con ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Comic book convention ကြောင့်ပါပဲ။ ထိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေအများစုဟာ ယနေ့ ၁၈ ရက်ဇူလိုင်မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် San Diego Comic Con ကိုလာရောက်ကျသူတွေဖြစ်လို့ ထိုပွဲမှာ ပါဝင်ပြသမယ့် Nintendo အနေနဲ့ အဆိုပါ လက်ဆောင်ကို စီစဉ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဟာ Nintendo နဲ့ Southwest လေကြောင်းတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Surprise မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးအော်လန်မြို့ကနေ ဒါးလက်စ် မြို့ကို ပျံသန်းတဲ့ ခရီးစဉ်မှာလည်း Wii U ဂိမ်းစက်နဲ့ Super Mario Bros. U ဂိမ်းကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၁၆ တုန်းကလည်း ဒါးလက်မြို့ကနေ လော့စ်အိနိဂျယ်လိစ်ကို ပျံသန်းခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်မှာလည်း Nintendo 3DS XL နဲ့ Super Mario Maker ဂိမ်းကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်လည်း Southwest လေကြောင်းလိုင်းစီးဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီမလား?
၂၀၂၂ မှာ Super Mario ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုခု ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ Southwest လေကြောင်းကိုပြေးပြီးသာ ဘိုကင်တင်လိုက်ပါ။
Surprise အလုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခရီးသည်တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို အောက်ပါ Tweet မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
— Lauren 🎤hosting @ Comic-Con (@LaurMoor) July 17, 2019
လယောဉျတဈစီးလုံး နငျတနျးဒိုး ဂိမျးစကျ လကျဆောငျပေးပွီး Surprise လုပျခံခဲ့ရ
ယနမေ့နကျက အမရေိကနျနိုငျငံ ဒါးလကျဈ မွို့မှ ဆနျဒီယဂေိုမွို့သို့ ပြံသနျးခဲ့တဲ့ Southwest Airline လယောဉျခရီးစဉျတဈခုလုံးမှာ လိုကျပါစီးနငျးခဲ့တဲ့ ခရီးသညျတှအေားလုံးကို မထငျမှတျထားတဲ့ အံသွမှုမြိုး ပေးစှမျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါကတော့ ခရီးသညျတှအေားလုံးကို Nintendo Switch ဂိမျးစကျ တဈလုံးစီနဲ့ မကွာသေးမီက အသဈထှကျခဲ့တဲ့ Super Mario Maker2ဂိမျးတဈခုစီကို လကျဆောငျအဖွဈ ပေးအပျခဲ့ပါတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထိုအစီအစဉျကိုတော့ Nintendo နဲ့ Southwest Airline တို့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျတာဖွဈပွီး လကျဆောငျ စုစုပေါငျးတနျဖိုးငှကေတော့ မွနျမာငှေ ၅၅၀,၀၀၀ ကပျြခနျ့ ဖွဈပါတယျ။
ခရီးသညျတှရေဲ့ ထိုငျခုံတဈခုခငျြးစီမှာတော့ အောကျပါ ကဒျလေးတှပေေးထားခဲ့ပါတယျ။
“Southwest လကွေောငျးမှ အကောငျးဆုံး ခရီးသှားဖျောအဖွဈ နငျတနျးဒိုး Switch ကို တငျပွအပျပါတယျ။ နငျတနျးဒိုးနဲ့ Southwest လကွေောငျးရဲ့ လကျဆောငျအဖွဈ Nintendo Switch ဂိမျးစကျနဲ့ Super Mario Maker2ဂိမျးကို ရယူလိုကျပါ” လို့ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ
အခြို့သော ခရီးသညျတှကေတော့ ဂိမျးစကျနဲ့ ဂိမျးအပွငျ Mario ဦးထုပျ တှပေါ လကျဆောငျရခဲ့ကွတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
ထိုသို့ လကျဆောငျပေးခဲ့ခွငျးတှရေဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ နှဈစဉျလူပေါငျး တဈသိနိးခှဲခနျ့လာရောကျကတြဲ့ San Diego Comic-Con ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာကြျော Comic book convention ကွောငျ့ပါပဲ။ ထိုလယောဉျခရီးစဉျမှာ ပါဝငျသူတှအေမြားစုဟာ ယနေ့ ၁၈ ရကျဇူလိုငျမှာ စတငျကငျြးပမယျ့ San Diego Comic Con ကိုလာရောကျကသြူတှဖွေဈလို့ ထိုပှဲမှာ ပါဝငျပွသမယျ့ Nintendo အနနေဲ့ အဆိုပါ လကျဆောငျကို စီစဉျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ လကျဆောငျပေးတဲ့ အစီအစဉျဟာ Nintendo နဲ့ Southwest လကွေောငျးတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Surprise မဟုတျပါဘူး။ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ အမရေိကနျနိုငျငံ နယူးအျောလနျမွို့ကနေ ဒါးလကျဈ မွို့ကို ပြံသနျးတဲ့ ခရီးစဉျမှာလညျး Wii U ဂိမျးစကျနဲ့ Super Mario Bros. U ဂိမျးကို လကျဆောငျပေးခဲ့ဖူးပွီး ၂၀၁၆ တုနျးကလညျး ဒါးလကျမွို့ကနေ လော့ဈအိနိဂယျြလိဈကို ပြံသနျးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉျမှာလညျး Nintendo 3DS XL နဲ့ Super Mario Maker ဂိမျးကို လကျဆောငျပေးခဲ့တဲ့ အမှတျတရတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။
သငျလညျး Southwest လကွေောငျးလိုငျးစီးဖို့စိတျဝငျစားနပွေီမလား?
၂၀၂၂ မှာ Super Mario ဂိမျးအသဈတဈခုခု ထှကျလာပွီဆိုရငျတော့ Southwest လကွေောငျးကိုပွေးပွီးသာ ဘိုကငျတငျလိုကျပါ။
Surprise အလုပျခံခဲ့ရတဲ့ ခရီးသညျတဈဦးရဲ့ ကိုယျတှေ့ အဖွဈအပကျြကို အောကျပါ Tweet မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။